DPF Alternatives | Serivisy fanadiovana sy fanarenana DPF. Ny fanadiovana DPF manomboka amin'ny .95
Natao ho an'ny Index izao
Natao hanaraka izao
Serivisy fanadiovana / famerenana amin'ny laoniny DPF
Maninona ny DPF Alternatives
Fitaovana fanadiovana DPF
Warranty amin'ny fahombiazana mandritra ny androm-piainana
Daty fanarahana ny EPA
DPF Alternatives dia manolotra serivisy pneumatika, fanaova-mofo ary famerenana amin'ny laoniny DPF. Ny safidy tsara indrindra nataon'i Amerika hitandrina ny fihazakazahan'ny DPF ho lava kokoa.
Toerana misy ny serivisy na Call for Quote 833.373.2583 ny ext: 0
Maninona no mifidy DPF Alternatives?
DPF Alternatives dia manana toerana isokafana isam-bolana miaraka amin'ireo matihanina DPF voaofana sy voamarina.
Hodiovinay na haverina amin'ny laoniny izay rehetra DPF rafitra tianao ny fepetra vaovao misy valiny azo antoka amin'ny ampahany kely amin'ny vidiny vaovao. Ho fanampin'ny serivisy DPF anay dia manolotra ihany koa izahay DOC (Catalysie Diesel Oxydation), SCR (Reduction Catalyst Selective) ary EGR Fanadiovana sy famerenana amin'ny laoniny (Gas Exhaust Recirculation). 833.737.2583 ny ext: 0
Marika 1, anarana 1, serivisy mitovy, fitaovana mitovy = tsy fitoviana amin'ny serivisy sy kalitaon'ny firenena
24hr ka hatramin'ny 48ora fihodinana
Fandraisana sy fandefasana maimaim-poana
Valiny azo antoka na tsy mandoa ianao
Valiny azo antoka azo antoka, mamonjy an'arivony, an'arivony, na an-tapitrisany amin'ny fanoloana DPF. Miaraka amin'ny safidy 3mo, 6mo, 1yr, ary ny fiantohana mandritra ny androm-piainana misy. Tongava hiaina ny tsy fitoviana. Izahay no safidy tsara indrindra amerikana amin'ny fanadiovana sy famerenana amin'ny laoniny ny DPF. 833.737.2583 ext.0
Nahoana no zava-dehibe ny fanadiovana DPF (Diesel Partulateate Filter)?
Ny fanadiovana sy fitazonana DPF araka ny tokony ho izy amin'ny fotoana voalohany dia hiaro anao amin'ny fahatapahana lafo be sy tsy ilaina. Ankehitriny mihoatra noho ny hatramin'izay, raha mitazona tsara ny rafitra DPF ianao dia afaka misoroka mora foana ny tsy fahombiazan'ny lozam-pifamoivoizana manomboka amin'ny $ 1 ka hatramin'ny $ 10,000. Tsy vazivazy. Aza manao an'io olona io. Eto amin'ny DPF Alternatives ny fitaovanay, ny fizotrantsika ary ny vahaolana propriétialy SL30,000 dia hamerina ny DPF ho an'ny specs OEM. Ny fiantohana anay dia tsy manan-tsahala ary ny tsara indrindra amin'ny indostria. Hanavotra anao amin'ny andro ratsy DPF izahay. 833.737.2583 ext.0
Fa maninona no zava-dehibe ny fanadiovana DOC (Diesel Oxidation Catalyst)?
Ny DOC (Diesel Oxidation Catalyst) dia zava-dehibe amin'ny asan'ny DPF mety. Mipetraka mivantana eo ambonin'ny DPF izy io. Raha tsy voadidy araka ny tokony ho izy miaraka amin'ny DPF izy io dia afaka mametaka DPF mialoha ny fotoana. Sarotra ve ny feo? Avelao izahay hanazava. Raha manana fiangonanan-karena ny DOC ary mametraka DPF vaovao na DPF voadio ianao amin'izany, ny faharoa dia mampirehitra ny motera ny soot rehetra avy ao amin'ny DOC dia hiditra mivantana ao amin'ny DPF izay hitrangan'ny DPF. Ity dia iray amin'ireo antony maro ao amin'ity indostria ity izay iainan'ny mpanjifa jiro maotera, herinaratra ambany, ary vidiny fanampiny taorinan'ny fanovana na serivisy DPF. Aretin'andoha be io ho antsika rehetra! Minoa Ahy. Tsy hanova ny diaper-jaza ianao ary tsy hamafa ny lamosiny, sa tsy izany? Manantena aho fa tsia. Aza manadio, mamerina, na manolo ny DPF raha tsy manompo ny DOC. Mitondrà DPF sy DOC, ary hataonay antoka fa haverina amin'ny laoniny OEM izy ireo. 833.737.2583 ext.0
Fa maninona no zava-dehibe ny fanadiovana SCR (Selective Catalyst Reduction)?
Sarotra ity. SCR (Selective Catalyst Reduction) dia miteraka olana goavana manerana ny firenena. Mandany vola amina miliara dolara amin'ny tompona diagnostika sy fanoloana SCR. SCR dia mipetraka eo ambanin'ny DPF. Matetika ny fironana manaraka ny fitsaboana dia toy izao: DOC, DPF ary SCR. Mandritra ny fotoana vitsivitsy ary mandraka androany dia miteny ny olona hoe: "Tsy afaka manadio SCR ianao". Tsy hiteny isika hoe diso izy ireo ary tsy hiteny hoe marina isika. Izay holazainay dia- manana kilasy feno SCR an'arivony maro izahay izay mahomby tokoa ao anatin'izany ny rafitra Detroit 1box. Tsy vitan'ny fizotran-tsika ny manaisotra ny fametrahana DEF vita amin'ny kristaly manelingelina ny fitsinjarana ny vazo mandany (ka manampy ny catalyst hampihena (NOX) hanakaiky ny zero ny fantson'ny rambo) dia azontsika atao izany nefa tsy manimba ny Catalyst mihitsy. Alohan'ny hanoloanao ny SCR amin'ny $ 5,000 na mihoatra dia antsoy izahay. Averinay amin'ny spec OEM izany na tsy mandoa fotsiny ianao. 833.737.2583 ext.0
DPF Systems izahay manompo:
Tsy mahita ny DPF anao? Mbola manadio azy io ihany izahay. 833.737.2583 ext.0
DPF momba ny harena ankibon'ny tany, DPF amin'ny fananganana, DPF fambolena, DPF Transit, DPF OTR, mpandeha ho an'ny DPF maivana / salantsalany ary mavesatra. Tsy mahita ny indostriao? Mbola manompo azy io izahay. Miantso ny teny nindramina. 833.373.2583 ext.0
~ Mihazakazaka Cleaner Longer ™ ~
VAKIO IZAY LAZAIN'NY MPANJAKA ANAY MOMBA ANAY :
Tonga eo ambany ny serivisy mahavariana
"Ny hany holazaiko dia WOW. Hatramin'ny nanombohinay nampiasa DPF Alternatives, dia mitahiry sy manampy ny ambany izahay. Ny vidin'ny DPF Alternatives no tsara indrindra, miampy ny fandraisana sy ny fandefasana - serivisy mahatalanjona fotsiny. Hampahafantarinay rehetra momba anao sy ny serivisinao tsy manam-paharoa. Mamerina ny fisaorana anao."
Manova ny lalao
“DPF Alternatives dia manova ny lalao amin'ny fanadiovana ny sivana DPF. Tsy ho sambatra kokoa aho. Manana 12 isx rehetra miaraka amin'ny sivana aho. Avy any Atlanta ny fiaramanidina misy ahy ary ny DPF Alternatives avy any Commerce City, Colorado dia hahazo ny fanadiovako rehetra rehefa mandeha any Colorado ny kamiko. Tsy hiverina amin'ilay karazana fanadiovana azoko taloha intsony aho. ”
Mihazakazaka Mahatalanjona ny kamio !!!
“Manana Ford F2008 350 aho. Nametaka ny DPF. Nentiko tany amin'ny mpivarotra izany, rehefa avy niandry herinandro aho, dia notarihin'izy ireo ny kamio. Nolazain'izy ireo tamiko fa vaky ny catalyst-ko ary mila soloina aho, ary ny DPF dia nopetahana ary mila soloina. Handany $ 4K eo am-baravarana aho. Niditra an-tserasera aho ary nandinika ny safidiko. Fohy ny tantara, nodioviny ny DPF, nodioviny ny catalyst -ko ilay notenenin'ilay mpivarotra fa vaky ary mila soloina. Teo ivelan'ny $ 1000 teo am-baravarana aho na dia nisy fanampiny aza azoko natao. Ary mandeha tsara ny kamio !!! ”
Toy ny Vaovao ilay seramika
"Tokony hiaiky aho fa somary nisalasala ihany aho momba ny safidin'ny fanadiovana ultrasonic Diesel Particulate Filter. Saingy rehefa vita izany dia tsy ho faly intsony aho. Tsy mbola nisy DPF niverina teto amin'ity madio ity, ny seramika dia toy ny vaovao, mitovy amin'ny nolazainao. Hatramin'ny nanombohanay nampiasa ny serivisinao dia tsy niova firy ny kamarinay ary naharitra ela kokoa noho ny fanadiovana tany am-boalohany vitako. Mamerina ny fisaorana anao."
Toerana misy ny serivisy sy fanokafana bebe kokoa isam-bolana
Tadiavo ny toerana
DPF Alternatives dia manana tombony azo atao miaraka amin'ny tsena marobe mivarotra haingana. Raha liana amin'ny fidirana amin'ny tsena fihomboana mihombo be sy haingana dia haingana ianao, ny ankohonana DPF Alternatives dia mitady mpilalao ekipa tsara te-hanatsara.
Tompona fivarotana Diesel amin'ny serivisy feno- jereo raha mahafeno fepetra handray ireo fitaovantsika TSY MISY VOLA.
Mifandraisa amin'ny VP anay, Chris Burrei amin'ny (435) 817-3828.
Fanadiovana DPF ultrasonic = Vahaolana avoakan'ny avo indrindra
Fitaovana fanadiovana DPF manara-penitra
DPF Alternatives no mpamatsy ampahany Aftertreamtment anao
Ataovy ao anaty teti-bola ny fiaramanidina
DPF Alternatives : Rahampitso madio kokoa
Ny sivana ampiasain'ny Diesel Particateate anao dia manampy amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ary miaro ny kitapom-bolanao ny fizotran'ny fanadiovana ultrasonic DPF. Ny Serivisy fanadiovana DPF an'ny ultrasonic no fomba tokana voaporofo amin'ny fanadiovana tanteraka ny sela rehetra ao amin'ny DPF mba hitadiavana fepetra vaovao. Ny rafitra fanadiovana DPF Alternatives dia mampihena ny vidiny amin'ny fanitarana ny fiainana ilaina amin'ny sivana. Matoky tanteraka izahay amin'ny teknolojia, manolotra ny mpanjifa tsy misy olana izahay, mitarika indostrialy, antoka fampisehoana iray taona.
Ny dingan'ny fanadiovanay ambony dia mamerina ny singa ao amin'ny OE; manome antoka ny toekarena solika tsara kokoa sy fiainana ilaina kokoa isaky ny sivana DPF. Ny fomba fanadiovanay Ultrasonika izay voaporofo dia mampiasa onjam-peo miverimberina matetika amin'ny impulses an-tapitrisany isan-tsegondra hanapotehana ny fotony sy ny lavenona. Ny vahaolana namboarinay manokana dia mampidina ireo sombintsombiny ary mitazona azy ireo tsy hiangona any amin'ny rindrin'ny sela. DPF Alternatives dia manolotra serivisy fanadiovana DPF ambony ho solon'ny fanoloana OEM lafo vidy.
- Fitaovana fanadiovana natao hitandrina ny fihazakazahan'ny DPF ho lava kokoa -
Antoka mandritra ny androm-piainana amin'ny singa elektrika: famatsiam-bola 100% ho an'ny mpividy mendrika
Ny vidin'ny fonosana fitaovana hatramin'ny ambany ka hatramin'ny avo. Ny fonosana rehetra dia ahafahanao mamerina ny DPF amin'ny fepetra vaovao. Miantso ny antsipiriany 833.737.2583 ext.0.
Fonosana Blow and Bake fonosana fidirana $ 10,500.00
Kitapo famerenana amin'ny laoniny tanteraka • $41,447.90 • $43,447.90 • $43,693.15 • $54,662.90*Malaza indrindra • $67,187.00 • $75,761.00 • $96,810.90
Mianara momba ny fanadiovana sy famerenana amin'ny laoniny ny DPF
Database fanarahana ny EPA
© Zon'ny mpamorona - Alternative DPF